Fakantsary miisa 200 ao amin'ny Algorithme Google | Martech Zone
Talata, Jona 4, 2013 Douglas Karr
Eny, tsy mora izany fa kudos Backlinko ary SingleGrain amin'ny fampiarahana an'ity infographic ity izay mikendry ny fanaparitahana ny algorithm nomen'ny Google. Ny infographic dia mamakivaky ireo anton-javatra misy eo amin'ny sehatry ny sehatra, anton-javatra eo amin'ny pejy, anton-javatra ao amin'ny tranokala, anton-javatra backlink, fifandraisan'ny mpampiasa, famantarana fanampiny ary famantarana sosialy. Satria izy ireo tsy mampihatra a lanja isaky ny anton-javatra tsirairay,
Tsy hitifitra ny lisitra aho… Tsy mino ny laharan'ny fiatraikany rehetra aho fa ireo izay mbola tsy afaka mitaona ny fahombiazan'ny motera fikarohana anao amin'ny fampitomboana ny tahan'ny tsindry Na izany na tsy izany - lisitra feno feno ho anao izany hijerena sy hieritreretanao rehefa manatsara ny atiny ianao.
BugHerd: Tondro, kitiho ary hiaraha-miasa amin'ny Internet
Jun 4, 2013 ao amin'ny 10: 18 PM
Tena feno lisitra. Izy io dia manazava ny antony mahatonga ny SEO plugins manana ny ankamaroan'ireo voalaza etsy ambony ireo. Ohatra, SEO Presser. Misaotra anao amin'ireo laharan'ny "rehetra amin'ny toerana iray".
Jun 4, 2013 ao amin'ny 11: 17 PM
Lisitra tena mahaliana! Misaotra noho ny ezaka mahafinaritra
6 Jiona 2013 à 7:50
Loharano lehibe Doug! Ho zavatra hosoratako! Eo ambanin'ny fizarana anton-tohatra amin'ny habaka, manana "votoaty duplicate" ny sombin-doko dika mitovy. 🙂 Mety te hanamboatra azy io.
13 Jiona 2013 à 7:17
Misaotra amin'ity infografika ity.
Fanamarihana iray (ankoatra ny efa navoakan'i Jacquelyn): azonao atao koa ny manova ny sombiny eo ambanin'ny "Fotoana eo amin'ny tranokala" :).
Toeram-pisakafoanana any Mangalore
Sep 6, 2013 amin'ny 1: 10 AM
Sary infografika tsara. Raha azo atao dia lazao ny tranokalanao sy ny URL-ny amin'ny fampiasana ny teny fanalahidy. Ianao dia tokony
ampiasao izany amin'ny lohateny, famaritana ary meta tag amin'ny tranokalanao.
Misy milaza fa amin'izao fotoana izao dia tsy mijery ny meta tags intsony i Google
laharan'ny valin'ny fikarohana.
Jul 27, 2015 amin'ny 6: 26 AM
Jolay 27, 2015 amin'ny 12:46 PM
10 Oktobra 2015 à 11:48
Wow vao nahita ity lahatsoratra ity tao amin'ny Google aho ary misaotra betsaka amin'ny Marketing Tech Blog noho ny infograph lehibe toy izany izay tena tsotra ny fikarakarana.